China yakakoshwa bhandi conveyor fekitori uye vagadziri | Yuantuo
Yakakombama bhandi conveyor rudzi rwekuendesa michina ine hombe yekuburitsa chinzvimbo, yakaderera mashandiro emutengo uye yakafara application dura. Zvinoenderana nehurongwa hwayo hwekutsigira, pane mhando mbiri: yakatarwa mhando uye mbozha mhando; zvinoenderana nekuburitsa zvinhu, pane bhandi, bhandi repurasitiki uye bhandi resimbi. Iyo yekushanda nharaunda tembiricha yeanotakura kazhinji iri pakati pe - 10 ℃ uye + 40 ℃, uye tembiricha yezvinhu haifanire kupfuura 70 ℃; iyo isingashande yerabhabha bhandi inogona kutakura mhoro ...
Yakakombama bhandi conveyor rudzi rwekuendesa michina ine hombe yekuburitsa chinzvimbo, yakaderera mashandiro emutengo uye yakafara application dura. Zvinoenderana nehurongwa hwayo hwekutsigira, pane mhando mbiri: yakatarwa mhando uye mbozha mhando; zvinoenderana nekuburitsa zvinhu, pane bhandi, bhandi repurasitiki uye bhandi resimbi. Iyo yekushanda nharaunda tembiricha yeanotakura kazhinji iri pakati pe - 10 ℃ uye + 40 ℃, uye tembiricha yezvinhu haifanire kupfuura 70 ℃; iyo isina kupisa rabha bhandi inogona kutakura yakanyanya-tembiricha zvinhu pazasi pe120 ℃. Izvo hazvina kukodzera kushandisa bhandi rinotakura kana tembiricha yezvinhu yakakwira. Kana uchiendesa zvinhu neacid uye alkaline oiri zvinhu uye ma organic solvents, rabha kana epurasitiki mabhandi anomira kumafuta uye acid uye alkali inofanira kushandiswa Kune matanhatu marudzi ebhandi anotakura: 500, 650, 800, 1000, 1200 uye 1400mm. Zvinoenderana nehurefu hwekuratidzira, mhando yemhando, kugona, kuburitsa kugona, kuendesa kureba uye zvimwe zvinhu zveanotakura bhandi, mushandisi anogona kuona marongero eanotakura uye yakasarudzika bhandi upamhi, matanda echirafu uye ukobvu hwebhandi nekuverenga.
Belt conveyor inoshandiswa zvakanyanya mukuumbiwa kwesimbi, kucherwa, marasha, chiteshi, kutakurwa, mvura nemagetsi, indasitiri yemakemikari nemamwe madhipatimendi ekurodha, kurodha, kuendesa kana kuisira zvinhu zvakasiyana zvakasununguka nehukuru hwe500 ~ 2500kg / m3 pane tembiricha yakajairwa. Bhandi rekutakura rine zvakanakira hombe yekuburitsa kugona, chimiro chakareruka, kugadzirisa zvirinani, mutengo wakaderera uye kuita kwakasiyana-siyana kwakasimba. Bhandi rinotakura rinoumbwa neyechete kana yakawanda yunifomu yunifomu yekufambisa sisitimu yekutakura zvinhu. Zvinoenderana nezvinodiwa muitiro, zvinogona kurongedzwa mune yakatwasuka kana kuteedzera fomu. Kunze kwekusangana nezvinodiwa zvekutenderera kana kurerekera kuburitsa, bhandi rinotakura rinogona zvakare kusanganiswa neconvex arc chikamu, concave arc chikamu uye chikamu chakatwasuka Chikamu chebhuroko remidziyo inobvumidzwa kutakurwa nebhandi conveyor kunyanya zvinoenderana nehupamhi bhandi. kumhanya, groove angle uye yekurerekera kona, uye zvakare zvinoenderana nekuwanda kwezvinhu zvakakura. Parizvino, tembiricha yekushandira yebhandi rinotakura kazhinji - 25 ～ + 40 ℃. Uye zvakare, kambani yedu zvakare inogadzira mwenje bhandi conveyor, yakatarwa bhandi conveyor, cheni conveyor, inofambiswa conveyor uye zvimwe zvakakosha chinangwa kuendesa michina.
Pashure: munyonga conveyor
Zvadaro: kurerekera kufambisa
Airport Conveyor Bhandi
Yekufambisa Belt Rollers
Mini Yekutakura Belt